Mareykanka oo u ugu yeeray Yuhuuda in ay hakiyaan deegaameysiga Daanta Galbeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMareykanka oo u ugu yeeray Yuhuuda in ay hakiyaan deegaameysiga Daanta Galbeed
February 3, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Mareykanka oo u ugu yeeray Yuhuuda in ay hakiyaan deegaameysiga Daanta Galbeed. [Sawirka: Archive]
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa shalay oo Khamiis ahayd ka codsaday Yuhuuda in ay joojiyaan dhismaha deegaameysiga cusub, iyaga oo sheegay in dhismayaasha cusub ee ay Yuhuudu ka wadaan Daanta Galbeed ay waxyeeli doonto dadaalada nabada ee lagu dhexdhexaadinayo Falastiiniyiinta iyo Israa’iil.
“Haddii aynaan aaminsanayn jiritaanka deegaamesysiga waa arrin caqabad ku ah nabada, dhismaha deegaameysiga cusub ama is-balaarinta ka jirta duleedka xuduudooda maahan mid suurtagal ka dhigaysa in la gaaro yoolka,” Sidaa waxaa bayaan ku yiri afhayeenka Aqalka Cad Sean Spicer.
Sean Spicer ayaa carabka ku adkeeyay in Madaxweyne Donald Trump uusan si rasmi ah go’aan uga qaadan deegaameysiga Israa’iil ee dhismaha cusub ayna u muuqato in arrintaas uu kala hadli doono Raysulwasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu marka uu booqasho ku yimaado Aqalka Cad 15-ka bishaan Febaraayo, sida la qorsheeyay.
Maamulka Yuhuuda ayaa Talaadadii ansixiyay dhismaha 3,000 oo unugyo cusub ah oo laga dhisayo Daanta Galbeed kadib markii todobaadkii lasoo dhaafay ay ansixiyeen 3,066 oo guryo cusub ah oo ay Yuhuudu ka dhisto bariga Qudus iyi Daanta Gaalbeed.
Xeerka Caalamiga ah ayaa u arka bariga Qudus iyi Daanta Gaalbeed “dhul ay qabsadeen” Yuhuudu, taasoo sharci daro ka dhigaysa dhammaan howlaha deegaamaysiga Yuhuuda oo ay halkaas ka wado.
Qiyaastii 500,000 oo Yuhuud ah ayaa hadda kunool in ka badan deegaameysi keliya oo laga dhisay Daanta Galbeed ee Falastiin iyo bariga Qudus tan iyo sanadkii 1967-dii.
Falastiiniyiinta ayaa doonaya in deegaanadaas ku teedsan Marinka Qasa laga asaaso dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin mustaqbalka.